Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Mgbapụ njem 2022: Oge kacha mma iji deba ụgbọ elu na ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Ịtụ egwu • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • ndị mmadụ • Rail njem • Iwughachi • Resorts • Ịrụ ọrụ • Ịzụ ahịa • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Mgbapụ njem 2022: Oge kacha mma iji debe ụgbọ elu na ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ
Ebe enweghị atụmanya metụtara ọrịa na -aga n'ihu, ime mgbanwe ga -abụ ihe kacha mkpa maka ndị njem ụlọ na mba ofesi.
Oge kacha mma n'izu iji gbaa ụgbọ elu bụ Sọnde, ọ bụghị Fraịde.
Ọ bụ ezie na ọnụego ụlọ na -agbada na 2020, ọnụ ahịa ji nwayọọ nwayọọ mụbaa n'afọ gara aga.
Ka ndị njem na -aga n'ihu na -eme atụmatụ njem ndị njem, ụlọ ọrụ na -egosi ụbọchị kacha mma ịdebe mgbazinye ụgbọ ala bụ Tọzdee maka njem ụlọ.
A na -ewepụta akụkọ ọhụrụ na -ekpughe ihe mgbochi njem nke afọ a, gụnyere oge kacha mma ịde akwụkwọ njem ụgbọ elu, mgbe aga njem na ndụmọdụ ndị ọzọ iji nyere ndị njem aka ịnyagharị akwụkwọ ezumike na 2022, ka ewepụtara taa.
Ka ọnwa iri na asatọ gachara, ndị njem mba ofesi amalitela ịpụta ọzọ, dị njikere inyocha ụwa na ahụmịhe njem na-agbanwe ndụ nwere ike iweta ọzọ. Dị ka akụkọ ahụ si kwuo, otu n'ime ndị njem anọ na -achọ ndụmọdụ nchekwa ego na pasent 18 na -egosi na ha dị njikere ime mgbanwe na atụmatụ njem ha ịchekwa ego.
Atụmatụ ụgbọ elu ụgbọ elu maka 2022
Dabere na data si ARC, nkezi ọnụ ahịa tiketi (ATPs) na mbido 2021 ka dị elu karịa afọ gara aga; agbanyeghị, na -abịa Eprel enwere mbelata. ATP maka ụgbọ elu mba ụwa na nke ime ụlọ amụbaala nke ukwuu mana ọ ka na -adịkarị ihe dị ka pasent 25 dị ala ma e jiri ya tụnyere 2019.
Window ntinye akwụkwọ kacha mma
Ọnụ ahịa ụgbọ elu ụlọ na -amalitekarị ịbawanye ụbọchị 35 tupu ọpụpụ, ebe ọnụahịa maka ụgbọ elu mba ofesi na -amalite ịrị elu ụbọchị 28 tupu. Ebe dị ụtọ ịde akwụkwọ ụgbọ elu nke ụlọ dị n'etiti ụbọchị 28 - 49 tupu oge eruo, ebe ekwesịrị ịdebe ụgbọ elu mba ofesi ọnwa atọ ma ọ bụ anọ tupu oge eruo maka ọnụ ala kacha ala.
Ezigbo ụbọchị n'izu iji akwụkwọ
Oge kacha mma iji gbaa ụgbọ elu bụ Sọnde, ọ bụghị Fraịde. Maka ụgbọ elu ụgbọ elu nke a nwere ike ịchekwa ndị njem ihe dị ka pasentị iri na ise na maka ụgbọ elu mba ofesi, ego echekwara ihe ruru pasenti iri.
Ezigbo ụbọchị n'izu iji mee njem
Oge kacha mma ịmalite njem ime ụlọ bụ Fraịde abụghị Mọnde, ebe ndị njem nwere ike chekwaa ihe ruru pasentị iri abụọ na ise.
Maka ụgbọ elu mba ofesi, malite njem na Satọde, ọ bụghị na Tuesday iji chekwaa ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ pasent 10.
Ọnwa kacha mma iji mee njem
Ndị njem na -eme atụmatụ njem ha n'afọ 2022 nwekwara ike imepe nnukwu ego site n'ịdị mgbanwe na ịhọrọ ọnwa kwesịrị ekwesị maka njem:
Ọnwa kachasị mma ịpụ bụ Jenụwarị na Disemba. Maka ụgbọ elu ụgbọ elu nke a nwere ike ịchekwa ndị njem ihe dịka 15 % na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ pasent 30 maka ọpụpụ mba ofesi.